Brand24: Kushandisa Kuteerera Kwemagariro Kuchengetedza uye Kukura Bhizinesi Rako | Martech Zone
Isu takanga tichangobva kutaura nemutengi nezve kushandisa vezvenhau uye ini ndakamboshamiswa nekushomeka kwavo. Ivo vakatendeseka vakanzwa sekunge kwaive kutambisa nguva, kuti ivo havakwanise kuzadzikisa mhedzisiro yebhizinesi nevatengi vavo vakarembera paFacebook nedzimwe nzvimbo. Zvinovhiringidza kuti ichi chichiri chitendero chakakurumbira nemabhizinesi mushure memakore gumi ekudzidza maitiro uye maturusi ekubatsira. Chete 24% yemhando dzinoti ivo vanoita kutarisana nevanhu
Chii chinonzi Kuterera Kwemagariro?
Kuteerera munharaunda inzira yekushandisa chaiyo-nguva yekuongorora maturusi ekuteerera kutaurwa kwechako, chigadzirwa, vanhu kana indasitiri pamhepo, pamwe nekuyera zvinotaurwa nekufamba kwenguva. Zvishandiso zvakakosha zvinodiwa nekuti mainjini ekutsvaga haataure ruzivo urwu mune chaiyo-nguva - kazhinji ichirasika ruzhinji rwehurukuro munzanga dzemasaiti enhau zvachose.
Panzvimbo pekukura kuburikidza nekuratidzwa kweanotyisa manhamba, isu takangovaratidza kwavari kuti yaishanda sei. Isu tanga tichiedza Brand24 kweinopfuura mwedzi pari zvino uye tide iko kusununguka kwekumisikidza nekutarisa edu emhando, vanhu, zvigadzirwa uye maindasitiri kuburikidza nepuratifomu - wobva waziviswa kana paine mikana. Brand24 ine yakachena interface, inokwanisika, uye ine yakazara email yambiro.
Uchishandisa Kuterera Kwemagariro Kuchengetedza uye Kukura Bhizinesi Rako
Isu takaratidza vatengi vedu maitiro ekushandisa enhau enhau kune zvakanaka zvebhizinesi, vachimhanya nemhando yezviitiko:
sevhisi - isu takamhanya mimwe mibvunzo tikacherekedza pakanga pataurwa zita ravo pamhepo, asi hapana kana mumwe wavo akabva apindura. Wakave mukana wakarasika wekutangira pamberi peyakaipa mamiriro uye kubatsira mumwe wevatengi vavo kubuda… asi vakaupotsa. Iyo kambani haina kuziva kuti nhaurirano dzaiitika kwainge dzisina kunyorwa muhurukuro.
Sales - takamhanya nemibvunzo pamasevhisi avo tikavaratidza paive nevamwe vangangove vatengi vachibvunza nezve iwo masevhisi avanofanira kupa… asi mhinduro dzaive rese network yekutarisira ichiedza kupa mamwe mazano. Fungidzira kana rimwe reboka ravo rekutengesa rakapinda mukati ndokupa imwe nyanzvi mhinduro. Mutengi mutsva? 54% yevatengesi veB2B vakati vagadzira zvinotungamira kubva pasocial media
ushambadzi - iyo kambani yanga ichienda kune zvimwe zviitiko zveindasitiri kwavange vachisimudzira masevhisi avo. Isu takavaratidza uko vamwe vanhu mumaindasitiri avo vaigadzira misangano yakarongwa nevatarisiri vatengi pamberi pechiitiko kuburikidza nevezvenhau. 93% yesarudzo dzevatengi dzekutenga dzakakanganiswa nevezvenhau
Marketing - kambani iyi yaiita kushambadzira kwechinyakare asi haina kumbosundidzira vanhu kune yavo saiti kuti uwane rumwe ruzivo. Panzvimbo yavo saiti, ivo vaive nema ebook uye zvimwe zviwanikwa, asi ivo vaisambovasimudzira online. Isu takavaratidza kuti vakwikwidzi vavo vaibudirira sei kusimudzira zvemukati uye kutyaira kunotungamira kune ekumhara mapeji.
Kuchengeta - Takaratidza kambani kuti mamwe makambani aibatsira vatengi vavo online pamberi peveruzhinji, vachipa rutsigiro rukuru kuburikidza nechero chiteshi… kuti mutengi aizvida sei. Kwete chete nzira huru yekuchengetedza vatengi vako, asi kubvumira vamwe vangangove vatengi kuti vaone sevhisi huru. Chete 39% yemabhizinesi anoshuma vachishandisa data revatengi uye maitiro ehunhu kuumba nzira yekutengesa
Insights - isu takabvunza kuti vanga vachiwana sei mhinduro pazvigadzirwa nemasevhisi avo uye vakati vakaita ongororo dzenhare nekufona nevatengi. Isu takavaratidza mashandisiro avanogona kuita ongororo dzakasiyana siyana mumasocial media kuti vawane mhinduro inoenderera nevatengi vanoshanda vasina kushandisa mari zhinji. 76% yevatengesi vanoti vanofanirwa kuve vakanyanya-kutariswa kuti vabudirire
Maitiro - kambani iyi yaive nevatengesi nevatengesi muindastiri vaive vakakurumbira, asi havana kuziva zvinotevera nekufurira vamwe veavo vanhu nemakambani vaive online. Isu takavaratidza mawaniro avanogona kuita uye kukumbira rubatsiro rwevanokurudzira kuti vasvike kune vatsva, vanokodzera vateereri vasina kushandisa mari zhinji kushambadza.
Mukurumbira - takavaratidza maitiro avanogona kuongorora nekupindura kushoropodzwa kwakaitwa pamhepo pamberi pevanhu. Kwete chete ivo vaigona kupindura, ivo vaigona kupa mhinduro iyo inobvumidza vamwe vangangove vatengi ruzivo rwekuti vangatarisira sei aya mamiriro.
Reviews - takavapa akati wandei eniche ekuongorora masayiti muindasitiri yavo, mamwe ayo ivo vaisatomboziva kuti aripo. Isu takavawana nekuita imwe tsvakiridzo yezve kwaikwikwidzwa navo. 90% yevatengi vanovimba nevezera rako pamusoro pe14% vanovimba kushambadza
gutsikana - patakaratidza kudyidzana kwevakwikwidzana navo, takakwanisa kuona dzimwe nhaurirano dzakadzama - yakawanda mukana wekunyora ebook kana kuburitsa infographic.
Organic Kutsvaga - takavaratidza kuti kugovana infographics kwakatungamira sei kumataurirwo, izvo zvakatungamira kune mamwe masayiti achivagovana, achigadzira akakodzera uye akasimba-ane mvumo ma link anofambisa organic yekutsvaga masosi
muchiuto - takavaratidza kuti vangatanga sei kunanga nekukwezva tarenda kukambani yavo kuburikidza nevezvenhau.
Trends - takavaratidza kuti misoro mumaindasitiri avo yaikura sei kana kudzikira nekufamba kwenguva, ichivagonesa kuita zvirinani kushambadzira uye kushambadzira sarudzo maererano nezve zvigadzirwa nemasevhisi.
Networking - isu takaratidza kuti zvaisawanzo kuita vanhu vangani vaitevera chikwangwani, peji, kana munhu pasocial media - yaive nzira yavakagonesa kubatana kune matsva network etarisiro.
Kutanga Mahara Brand24 Trial
Kana kambani yako iripo usimbe, Brand24 ine kusangana kukuru. Kunyangwe zvirinani, ivo vane yakakura chaizvo Mobile Anwendung naizvo.
Zvemagariro ekuteerera matanho kubva B2C
Tags: brand24kasitoma kunzwisisakuchengetwa kwevatengiMabatiro evatengivatengi maitirotsvaga vanokurudziramaindasitiri maitiroproduct product reviewsmbirikiromukurumbira manejimendiReviewsTsvaga Kutengesakutarisana nevanhukusimudzira vezvenhaukuongorora kwevanhuzvekutengesa munharaundakutengesa munharaundatarisa chigadzirwa wongororo
Nzira yekutengesa Sei Domain Domain Names
Chinyorwa chikuru! Ndatenda nekutaura nekukurudzira Brand24 ♥